मकै पोलेर जीवन यापन गर्नेहरुलाई समेत छोडिएन » Farakkon
मकै पोलेर जीवन यापन गर्नेहरुलाई समेत छोडिएन
मंगलवार, श्रावण २८, २०७६ २२:००
दाङ, साउन २८ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका परिशर चुरा,पोते, पानीपुरी, चाट, फलफूल तथा तरकारीले भरिभराउ थियो । कति सामान ठेलामा थियो, त कति भइमै असरल्ल । थिचिएका, मिचिएका, फुटेका, टुटेका, पोखिएका सामाग्री ठेला भरि र जमिनमा छरप्रष्ट थियो । मंगलवार बेलुकी पखको दृष्य हो त्यो । जहाँ मानिसहरु पनि चर्कौ स्वरले कराई रहेका थिए । यि सबै सामाग्री बजार क्षेत्रवाट जफत गरेर ल्याइएको हो । कार्यपालिका सदस्य दिपक कुमालको नेतृत्वमा गएका नगरका कर्मचारीले त्यो सबै उठाएर ल्याएका हुन ।
मकै पोल्दै गरेकाहरुलाई समेत छोडिएन, सडक किनारमा बसेर तरकारी बेच्नेपनि बचेनन् ठेलामा व्यापार गर्नेहरु त झनै जोगिने कुरै आउँदैन थियो ।
‘गरिवले पनि गरेर खान पाउनु पर्छ,हैन भने हामी चोरेर खान बाध्य हुने छौं,’ कतिपय कराई रहेका थिए ‘हामीमाथि अन्याए भयो न्याय माग्न आएका हौं।’ कतिपयले अब के हामीले हातमा उठाउँदै व्यापार गर्नु ? भन्ने प्रश्न गरिरहेका थिए ।
त्यस्तो माग गर्ने मध्यकी एक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ बेलुवा निवासी कमला बुढाथोकी पनि थिइन । जस्ले मंगलवार मात्रै सल्यानको कपुरकोटमा लाग्ने तरकारी हाट बजारवाट तरकारी खरिद गरेर ल्याएर सडकको पोल भन्दा भित्र बसेर व्यापार गर्न खोजेकी थिइन । त्यो पोको खोलेर विक्रि गर्ने सुरसार नगर्दै सबै तरकारी जवरजस्ती उठाएर लगियो । तर नजिकै तरकारी बेचिरहेकी चिनजानका अरुलाई भने केही गरिएन । २० हजार बराबरको सामान नगरका जिम्मेवार पदाधिकारीले चिलले बच्चा टिपेझैं उठाएर गायव बनाए । न्याय माग्न भन्दै बुढाथोकी पनि उपमहानगरपालिका आएकी थिइन ।
सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका वडा नं. ५ जामुनेका अम्मर रेउलेको ४० देखि ४५ हजार बरावरको तरकारीपनि नगरको पदाधिकारीले उठाएर ल्याए । उनले पनि वसपार्क जाने सडक खण्डमा हाल नगरले भत्काकाएको सडक किनारको छेउमा ती सामाग्री बेचिरहेका थिए । रेउलेले कसैको सामान उठाउने र चिनजानका व्यक्तिको समान छोडिदिने गरेको दोषारोपन गरे । रेउले र कार्यापालिका सदस्य दिपक कुमालका बीचमा पनि सामान लैजाने क्रममा जवाफ सवाल भयो । उधारोमा ल्याएको ४०÷४५ हजारको समान लैजान एकाएक कस्ले सहजै लैजान दिन्छ ? मैले बोल्नु र विरोध गर्न खोज्नु स्वाभाविक थियो,’ रेउलेले थपे ‘तर,सरले मलाई तिमि सल्यान–रोल्पाको मान्छे यहाँ बोल्न पाउँदैनौं,व्यापर गर्न पाउँदैनौं भन्नु भयो।’
तुलसीपुरमा जन्मेको व्यक्तिले मात्रै बोल्न र व्यापार गर्न पाउँछ भन्ने कुरा उनलाई पटक्कै चित्त बुझेन छ । ‘तुलसीपुरका मेयरसाप पनि कपुरकोटै जामुनेमा जन्मिनु भएको हो । त्यसो भए अव उहाँलाई पनि मेयरवाट बञ्चित गरिनु ठिक हो ,’ रेउलेले आक्रोस पोख्दै भने । कित आँफुहरु जस्ता ठेला व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हैन भने आँफुमाथिको अत्याचार बन्द हुनुपर्ने उनले माग गरे । ‘दिनमा दुई क्यारेट तरकारी बेचेर ५ सय आम्दानी गर्नेले कसरी २० हजार कोठा भाडा तिरेर पसल सञ्चालन गर्न सक्छ ? हामी त्यो दिन सक्दैनम्,’ रेउलेले भने ‘कि अव चोर्छम हामी कि भने हामीलाई व्यापार गर्ने सस्तो ठाउँको व्यवस्था गरिदिनु प¥यो।’
गरिव भएरै आँफु सल्यान छोडेर दाङ आएको बताएका उनले स्थानीय सरकारले गरेर समेत खान नदिएको गुनासो गरे ।
त्यस्तै शान्तिनगर गाउँपालिकाकी ३२ बर्षीया निर्मला वली अपाङ्गता भएकी महिला हुन । उनको एउटा हात र खुट्टामा समस्या छ ।
निर्मलाले तुलसीपुरका सडकमा बसेर मकै पोलेर जीवन यापन गर्दै आएकी छन् । त्यो मकै उनका पतिले झन्डै १३ किलोमिटर दक्षिणको फूलवारीवाट त्यसैदिन किनेर ल्याइदिएका थिए । मंगलवार दिउँसो उनले तुलसीपुरको बसपार्कको पिपल बोट नजिकै मकै पोल्ने सुरसार गर्दै थिइन । ठिक त्यही बेला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यापालिका सदस्य दिपक कुमाल त्यहाँ पुगे । निर्मलाले पोल्दै गरेका मकै उठाएर नगरको ट्रेक्टरमा हाल्न लगाए । निर्मलाले विरोध गर्न खोजिन । धक्का पक्का हुँदा निर्मलाका नाडीका चुराहरु फुटे । निर्मला नजिकैको नालामा लडिन । देव्रे खुट्टामा चोट लाग्यो । ‘म गरिव दुःखी मान्छे । मलाई लुच्छलाच्छ पारे । मेरो दुई बोरा मकै जवरजस्ती लगेर गए,’–वलीले भनिन् ।
उनीहरु प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । दर्जनौ सडक र छेउ छेउमा तरकारी तथा फलफूल बेच्ने साना व्यापारी मंगलवार उपमहानगरपालिकाको प्राङगनमा भरिभराउ थिए । गरिवले गरेर खान पाउनु पर्छ भन्ने उनीहरुको माग थियो । त्यसको व्यवस्थापन नगर्दै गरिव दुःखीका सामान जफत गर्नु गलत भएको उनीहरुको तर्क थियो ।
त्यसैमाथि उपमहानगरले ठेला व्यापारी बाट १ हजार ५ सय र क्यारेटमा तरकारी व्यापार गर्नेहरु बाट २ सय जरिवाना स्वरुप असुली रहेको थियो । त्यति जरिवाना पछि सामान लैजान पाइन्थ्यो । तर ठेला भने लैजान नपाइने नियम उपमहानगरपालिकाले बनाएको छ । तरकारी तथा फलफूल, चाट,पानी पुरी, चुरा लगाएतका सामाग्री बलजफती उठाएर ट्रयाक्टरमा लोड गर्दा च्यापिएर–थिच्चिएर आधा बढी काम नलाग्ने भइसकेको देखिन्थ्यो ।
निकट भविस्यमै ठेलाको लागि निश्चित ठाउँ तोकिन्छ – प्रवक्ता डाँगी
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रबक्ता सूर्य डाँगीले ठेला व्यापारका कारण चाडपर्वमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हुँदा त्यो व्यवस्थित गर्न उठाउनु परेको बताए । तुलसीपुरमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मान्नेतका साथ अन्य गाउँपालिका र बाहिरी जिल्लाका मानिसहरु समेत आएर अव्यवस्थित रुपमा सडकमा व्यापार गरेको हुँदा त्यो रोक्न आवश्यक रहेको डाँगीले बताए ।
वडा नं. १२ का वडा अध्यक्ष डाँगीले कसैलाई चिनाजनकै भरमा छुट दिएको भन्ने सवाल गलत भएको दाबी गरे । उनले निकट भविस्यमै ठेला व्यवसायीका लागि निश्चित ठाउँ तोकिने बताए ।